Itoobiya oo la wareegtay qalab Caafimaad oo loo qoondeeyay Wadama Afrika. - Awdinle Online
Itoobiya oo la wareegtay qalab Caafimaad oo loo qoondeeyay Wadama Afrika.
March 22, 2020 (Awdinle Online) –Maal qabeenka Shiinayska ah ee Jack ahna aas aasaha Shirkada Alibaba Group ayaa Magaaladda Adis Ababa ee Caasimada Dalka Itoobiya waxaa maanta oo axad ah gaasiyey qalab Caafimaad ee uu Wadamada Afrika u qoodeeyay
Diyaarad xamuul ah oo siday 6 milyan oo shay oo qalabka caafimaad ah oo ay ka mid yihiin wajiga gashiga (Maaskaro), qalabka difaaca, iyo xirmooyinka baaritaanka ayaa lagaarsiiyay Caasimada dalka Itoobiya ee Adis Ababa.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia, Aby Ahmed ayaa ka mahad celiyay qalabkaan caafimaad oo ay ugu deeqday shirkadda ganacsiga internetka ee loo yaqaan AlibabaGroup.
Jack Ma Aas aasaha Shirka ayaa sheegay in qalabkaan uu wax badan ka badali doono ka hortaga Coronavirus ee Wadamada Dhaqaalohoodu hooseeyo ee Afrika.
Abiy Ahmed Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa mahad celinta ka dib sheegay in qalabkaan wadamada kale ee Afrika Isniinta bari ah loo qaybinayo si ay ugu adeegsadaan ka hortaga Caabuqaan dilaaga ah.
Wasaaradda Caafimaadka ee Itoobiya ayaa Axadii maanta shaaca ka qaaday in ay xaqiijisay laba kiis oo kale oo ah COVID-19, taas oo tirada guud ee kiisaska ka dhigtay 11.
Previous articleGuddiga doorashooyinka qaranka oo soo saaray go’aan ku saabsan doorashada
Next articleWasaarada Caafimaadka KG oo dignin u dirtay xarumaha caafimadka gobalka